ကမ္ဘာ့ပထမဦးဆုံး အနောက်နိုင်ငံနှင့်ကျိုက်ဒဂုံ-ရွှေတိဂုံစေတီတော်ပုံစံတူ ~ Saw Chit Diary
ဓာတုစေတီ၊ ဥဒ္ဒိဿစေတီများကိုမွန်လက်ရာမပျက်၊ ကျိုက်ဒဂုံ-ရွှေတိဂုံစေတီတော်ပုံစံတူဖြင့်
အမေရိကန်နိုင်ငံတွင် လွန် ခဲ့သော နှစ်ပေါင်း(၅၇)နှစ်ခန့်တွင် မွန်ဆရာတော်ဦးသီလ၀ံသ တည် ထားခဲ့သော ရွှေတိဂုံစေတီတော် ပုံစံတူ စေတီဟောင်းတစ်ဆူကို အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုရှိ နိုင်ငံ ခြားသားတစ်ဦးပိုင် သစ်တောပိုင် နက်ထဲတွင် ပြန်လည်ရှာဖွေတွေ့ ရှိခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။
ယခုစေတီကိုပြန်လည်ရှာ ဖွေတွေ့ရှိသူမှာ ပိုင်းလော့ဆရာ တော်နှင့် အမေရိကန်မှ ဆရာ တော်၏ ဒကာအချို့တို့ဖြစ်ပြီး စေ တီ၏အောက်ခြေပတ်လည်နှင့် အလယ်ရစ်ထိ အုတ်များကြေမွ ပျက်စီးနေကာ ပြန်လည်မွမ်းမံရန် လိုအပ်နေကြောင်း သိရသည်။
‘‘စေတီက သူများမြေပိုင် နက်ထဲမှာ။ လမ်းမကြီးနဲ့ဆို တော် တော်ဝေးတာ။ ဘယ်သူမှ မသိ နိုင်တဲ့ တောထဲမှာ’’ဟု စေတီ တော်သို့ သွားရောက်ဖူးမြော်ခဲ့ သည့် အမေရိကန်တွင် နေထိုင်သူ မကေသီထက်က ပြောသည်။
အဆိုပါ စေတီကို ၁၉၅၈ တွင် နယူးယောက်ပြည်နယ် Allegany မြို့တွင် မစ္စတာ Gus Ruggieri ဆိုသူ လှူဒါန်းခဲ့သော မြေပေါ်တွင် မွန်ဆရာတော်က ရွှေတိဂုံစေတီတော်ပုံစံတူ အငယ် စားကို တည်ထားကိုးကွယ်ခဲ့ခြင်း ဖြစ်ကြောင်း www.muditabc. org တွင် John de Jardin ဆိုသူ က ရေးသားထားကြောင်း ပိုင်း လော့ဆရာတော်နှင့် နီးစပ်သည့် အသိုင်းအ၀ိုင်းထံမှ သိရသည်။
လွန်ခဲ့သော နှစ်ပေါင်း(၅၇)နှစ်က စေတီတည်ထားရာ နေရာ တွင်ပင် ပိုင်းလော့ဆရာတော်နှင့် အဖွဲ့က ပြန်လည်ရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့ ခြင်း ဖြစ်သည်။ ယခုစေတီတည် ရှိရာ မြေနေရာကို ပိုင်ဆိုင်ထား သော နိုင်ငံခြားသားထံမှ မြေ ကွက်ကို အလှူရှင်များက ပြန်လည်ဝယ်ယူထားပြီး စေတီကို မွမ်းမံပြင်ဆင်ရန် ပြင်ဆင်နေကြသည်။
မွန်ဆရာတော် ဦးသီလ၀ံသလောင်းလျာကို ၁၉၁၂ တွင် မွန်ပြည်နယ်ဝဲကလောင်ကျေးရွာ၌ မွေးဖွားပြီး အသက်(၁၅) နှစ်အရွယ်ရောက်ရှိချိန်တွင် သင်္ကန်းဆီးခဲ့သည်။
၁၉၅၅ တွင် စေတီဘုရား များ စတင်တည်ထားခဲ့သည်။ အိမ်နီးချင်းနိုင်ငံများ ဖြစ်သည့် ထိုင်း၊ ကမ္ဘောဒီးယား၊ နီပေါ၊ အိန္ဒိယနိုင်ငံများသို့ သွားရောက်ခဲ့ပြီး ၁၉၅၈ တွင် အင်္ဂလန်နိုင်ငံသို့ သင်္ဘောဖြင့် သွားရောက်ခဲ့သည်။ထို့နောက် အမေရိကန်နိုင်ငံ နယူးယောက်မြို့ Allegany သို့ ရောက်ရှိပြီး ရွှေတိဂုံစေတီတော်ပုံစံတူကို တည်ထားကိုးကွယ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။
Between 1988 and 2000 Sayadaw made three more extensive journeys outside Burma. Students of Namgyal Rinpoche helped to organizeavisit to Wangapeka_Stupa England, where Sayadaw constructedapagoda in Warwick in 1988. In 1990 he travelled to California and British Columbia, teaching in Los Angeles and Vancouver and buildingaspacious platform around the World Peace Pagoda on Galiano Island. In 2000 Sayadaw journeyed again to North America, constructingapagoda in Winnipeg andalarge Buddharupa at the Dharma Centre in Kinmount. Then he went on to buildapagoda in Barrydale, South Africa before returning to Burma. Though health problems prevented his direct participation, in 2006 students of the Ven Sayadaw constructedapagoda in Sao Paulo, Brazil, fulfilling his wish that pagodas be built on all six continents.